कफी ग्रह मा सबै भन्दा लोकप्रिय स्फूर्ति हुन सक्छ. नवीनतम अनुसन्धान भन्दा अरू यो रकम शायद साथ धेरै अन्य राष्ट्रका झूटा गर्दैनथे प्रकट र 50% अमेरिकी जनसंख्या को कफी पीने हो. खरीद आज लागि उपलब्ध कफी मेकर यस्तो एक विस्तृत विविधता छ किन कुनै पनि मुद्दा भन्दा ठूलो बढी साँच्चै मदत यो व्याख्या गर्न.
कैफीन उपकरणहरू यस्तो विविध सरणी, पहिलेभन्दा आफ्नो कफी-पिउने सार्वजनिक लागि अधिक विकल्प छ. मुख्य-धारा लोकप्रिय शैली पुस्तिका र स्वचालित भेटिन्छ, Pod एस्प्रेसो Percolator कफी र क्लीनर. यी शैली हरेकले कफी-पिउने सार्वजनिक को एक निश्चित खण्ड आकर्षित गर्न प्रत्याभूति छन् कि धेरै अनन्य विशेषता छ.
यस stovetop कफी एस्प्रेसो Brewers मौलिक तपाईं एक स्वचालित संस्करणमा ऊर्जा वा पहुँच को एक विद्युत आपूर्ति प्राप्त छैन पटक एस्प्रेसो कैफीन तयारी लागि एक पुस्तिका तरिका हो. यसले तपाईं एक एस्प्रेसो पैदल उत्पादन आवश्यकता महसुस गर्नुपर्छ angling वा ब्याकस्पेसिङ जाँदा बाहिर लिन सिद्ध कफी मिसिन हुन मदत गर्छ. सुरुमा पानी भट्टीमा भित्र स्थित र एस्प्रेसो मैदान भरिएको शंकु फिल्टर छ कि तलवों बायलर मा र पछि राखिएको छ. सबैभन्दा प्रभावकारी बिस्तारै कडा र छ अर्को निर्माता तापमान स्रोत माथि क्षेत्र हो. गर्मी प्रस्ताव देखि, भट्टीमा को शीर्ष ताजा पीसा कफी भरिएको छ पछि यो मिनेट को एक जोडी भएको पछि हटाइएको छ र एस्प्रेसो अर्पण गर्न तयार छ. तल फेरि, कुनै पनि वार्मिंग सुविधा नहुनु कैफीन तुरुन्तै सेवा गर्न छ सङ्केत.
स्वचालित र Manual प्रविष्टि कफी मिसिन
कफी निर्माता सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकार अझै पनि स्वचालित-थोपा coffeemaker छ. अत्यावश्यक छ भनी लेआउट शायद मिश्रित र फलदायी. बनाइयो-ट्यांक लागि ताजा पानी थप्न, उपयोगी फिल्टरिङ धारक मा एक निस्पंदन सम्मिलित, त्यसपछि सुरु स्विच धक्का आफ्नो चुनिएको कफी कारण निर्धारित र फिल्टरिङ गर्न मा भर्न. केही मिनेट नबित्दै आफ्नो भावना हट कि ताजा पीसा कैफीन को गंध उत्साहित छन्! थुप्रै डिजाइन पनि छ एक निर्माण-मा घडी प्लस एक बक्स मामूली समावेश तपाईं कफी आफ्नो एस्प्रेसो सेट गर्न सक्नुहुन्छ र रातको वा दिउँसो को कुनै पनि घंटा मा सेट गर्न त, र लगातार पनि राम्रो छैन प्रतिधारित.
सूचना ड्रिप कफी मिसिन तपाईं अर्को न्यानो स्रोत प्रयोग गरेर पानी भाप छ किनभने प्रदर्शन अलि धेरै छ, तर यो कैफीन तरल पदार्थ बक्स भित्रको भेला वा तल बक्स छ त फिल्टर भित्र java कारण रही र फिल्टरिङ माध्यम तातो पानी तयारी लागि नै कफी बनाउने प्रक्रिया मूलतः छ कि पछि. यो पुस्तिका गिर कफी मिसिन को एक राम्रो लाभप्रद सम्पत्ति तपाईंले प्रयोग गर्न बिजुली गरेर कुनै पनि सबै भन्दा यो प्रभावित छैन किनभने प्राप्त हुन सक्छ संग त यो शिविर लागि ठूलो र पनि अन्य आउटडोर चाहनाहरू छ जहाँ छ भन्ने तथ्यलाई छ.
एस्प्रेसो कफी निर्माता
Java कफी उत्पादक हाल छन् कि वर्ष र यस को एक परिणाम रूपमा धेरै अधिक किफायती हुन सकेका छन्, तिनीहरूले स्वीकृति मा मात्र एक मानक पैदल भन्दा बढी केहि खोजी निकै कफी प्रयोगकर्ताहरु को बीच विकास छौं. देखि चयन गर्न एस्प्रेसो कफी प्रणाली को धेरै प्रकारका वर्तमान छन्, अति स्वचालित र स्वचालित अर्थात् आंशिक. कम तिमी आफ्नो जावा पक के गर्न छ, एक नियम रूपमा, अतिरिक्त स्वचालित java निर्माता छ, तर दुःखको कुरा उच्च मूल्य यो किन्न छ. उदाहरणका, जो मा एक Semiautomatic मोडेल कफी मैदान tamp सक्छ, कैफीन पक, आफ्नो जाम लोड र पुरानो मैदान बेदखल, एक पूर्ण स्वचालित उत्पादन हुन सक्छ पनि नियमित व्यक्तिगत aswell तपाईं लागि कफी, र सुपर स्वत एस्प्रेसो कफी निर्माता यस्तो उदाहरणका निर्माण-मा पानी फिल्टर र घर-सफाई को लागि को रूप माथि यसबाहेक जोडी राखन रूपको सबै गर्न.
यी वर्तमान हालैका वर्षहरूमा धेरै स्टाइलिश र लोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन्. बस स्वचालित मिसिन छ कि थोपा जस्तै काम, तिनीहरूले स्वादिष्ट छ कि एस्प्रेसो काढा गर्न विशेषता कफी को prepackaged canisters उपयोग गर्ने क्षमता सुविधा. यस्तो स्टारबक्स अब कोसा ढाँचामा आफ्नो भन्दा कफी एकीकृत बेचन रूपमा धेरै सम्मानित कफी चेन प्रयोग, ग्राहकहरु तिनीहरूले बाहिर टाउको र एक उच्च मूल्य मा पहिले खरीद थियो जो घर मा विशेष जावा को ठीक त्यसै टेस्टिङ पट प्राप्त गर्न सक्छन्.
फ्रान्सेली प्रेस कफी-निर्माता
साथै भनिन्छ “भाँडा क्लिक” वा ” सवार भाँडा “, तिनीहरूले विगतमा थिए फ्रान्सेली हो कि प्रेस कफी मेकर रूपमा असामान्य हो. आयोजना एस्प्रेसो यो पहिले नै समीक्षा एक पुस्तिका कफी निर्माता हो किनभने यो कफी निर्माताहरूलाई को कुनै पनि लागू हुन चाहन्छु भन्दा सञ्चालन बढी छ. पैन साँच्चै एक गिलास पाइप समावेश छ एक, यस्तो उदाहरणका एक फिल्टरिङ लागि रूपमा कार्य गर्दछ कि सवार जाल. कफी कारण सुरुमा पैन मा तपाईं मापन हुनु पर्छ कफी बनाउने मदत गर्न, व्यावहारिक देखिनँ पानी मा अर्को भरण. यस सवार पछि प्रतीक्षा जाम वा पट मा बाध्य छ द्रवीभूत पेय संग तल थिचिएको छ, एक दम्पतीले क्षण लागि ठाडो गर्न java मिश्रण दिँदै पछि. नम्बर अभिन्न ताप कारक या दाँत जावा प्याकेज तल त्यहाँ जाँदा, तपाईं पछि लागि यो तातो कायम वा तुरन्त कैफीन पेय सहयोग गर्न आवश्यक एक कवर कन्टेनर मा यो छडी.
Percolator कफी मेकर एक पटक मा धेरै घरमा कफी Brewers को विशिष्ट प्रकारको थिए, एक कार्य अब स्वचालित थिए कि ड्रिप उपकरणहरू देखि प्रस्तुत. एक कफी-मेकर विरोध गर्न जावा को ठूलो सूची बनाउन सक्छ कि आवश्यक छ जब तिनीहरूले तैपनि आफ्नो स्थिति प्राप्त 10-14 रूपमा आज चिरपरिचित छैन, जबकि जाम सीमा वा कम. आधुनिक percolators विद्युतीय र स्टोभ शीर्ष शैली रूपमा पाउन सकिन्छ र थप छन् कि जस्तै स्वचालित कफी मिसिन सेट गरिनेछ. पानी उबला छ जबकि, कफी बनाउने विधि निरन्तर कफी कारण मा सञ्चालन पानी मा आधारित छ, बस एक धातु फिल्टर मा राखिएको. यो एस्प्रेसो सामान्यतया अब स्वाद मुश्किल र अधिक तीतो हुन्छ कि प्रक्रिया को एक बेफाइदा यो रचना चक्र माध्यम जान्छ.
सायद कफी-मिसिन को oddest खोज फारम मिसिन कफी मिसिन हुनेछ. केहि जस्तै विज्ञान-कथा भिडियो देखि चाहना, उपकरणले siphon टयूबिंग बाटो भएर दुई कन्टेनरहरुको लिंक को हुन्छन्. यस निस्पंदन माथिल्लो थियो कि पट तल्लो भाग मा स्थित छ. एक व्यक्ति सुरुमा दोस्रो कन्टेनर र कफी तर्क प्रदान, कम कन्टेनर अर्को cascades पानी, एस्प्रेसो काढा गर्न. निर्माता एक साथ दिए र पनि अन्त्य वाष्प शीर्ष जार मा ट्यूब मार्फत संयुक्त हात छ अर्को पानी पछि उबला छ कहाँ. पछि बारेमा3पट वाष्प संग गर्मी आपूर्ति लिइएका छ मिनेट फिल्टरिंग माध्यम र फिर्ता तल्लो मोडेल गर्न बाध्य छ कि पानी पानी मा फिर्ता बन्छ. जावा को व्यक्तिहरूलाई ताजा कन्टेनर अब कम प्रणाली भित्र बसेर छ. एउटा चाखलाग्दो दृष्टिकोण एक-कचौरा वा जावा को कन्टेनर बनाउन!
स्वाभाविक, कफी उत्साही कफी निर्माताहरूलाई को एक व्यापक चयन देखि चयन गर्न सक्छन्. स्वचालित हो कि उच्च अन्त सुपर कफी उपकरण गर्न सस्तो शीर्ष एस्प्रेसो कन्टेनरहरुको छ कि स्टोभ देखि, एक कफी मिसिन हरेक बजेट लागि साथै प्रत्येक इच्छा लागि छ. अचम्मको छ कि मीडिया! यहाँ आज असहज समाचार छ. सम्भवतः तपाईं लाभ उठाउन शैली बुझ्न पर्याप्त छैन, यो धेरै java मिसिनबाट आज देखि चयन गर्न. माथि ज्ञात कफी मिसिन मोडेल को प्रत्येक भित्र धेरै विभिन्न ब्रान्ड र देखि चयन गर्न संस्करण हो.
खुसीको इन्टरनेट तपाईं के मूल्य मा अहिले प्राप्य छ के पत्ता एक वास्तवमा लाभदायी र छिटो समाधान प्रदान गर्दछ. छानबिन एक सानो अवधि र यो सबैभन्दा ठूलो हो कि आफ्नो कफी निर्माताहरु देखि फोहोर पान को लागि पनि सम्भव छ. बस अनलाइन प्राप्त र धेरै कफी निर्माता साइटहरु मूल्यांकन भ्रमण. त्यसैले तपाईं सावधानी संग जाँच्न कुन कुरा विचार गर्नुपर्छ, प्रत्येक एक java निर्माता मूल्याङ्कन साइटहरु सामान्यतया फरक हो कि सम्झना कृपया.